jmyanmar | J-Myanmar
Jun 25, 2014 Alice Cooper ရဲ့New Guitarist Nita Strauss
Jun 6, 2014 Pepper (လူ​သား​များ​ရဲ့​ခံစား​မှု​ကို​နားလည် ပေး​နိုင်​သော စက်​ရုပ်)
May 29, 2014 ASIMO on LIVE
O-Daiko(japanese drummers – Taiko)
Golden Land Yangon, Myanmar
phyo, May 23, 2014
​မေးမြန်းသူ ။ ။ ဆောင်းပါးရှင် – ကိုညီညီ ( တောင်ကြီး ) . ကိုညီညီ ။။။။။။။။။။ ကိုစိုင်းလင်းသူ ငယ်ဘဝကျောင်းသားလောက ကနေ အခု ဒီ Networking နယ်ပယ်ထဲရောက်လာပုံလေးနဲ့ အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းလေးကို စလိုက်ကြရအောင်။ . ကိုစိုင်းလင်းသူ ။။။။။။။။။။ ကျွန်တော်က မန္တွလေးသား ပါ။ ( ၁ဝ ) တန်းအောင်တော့ ကျွန်တော့အမှတ်က ဆေးတက္ကသိုလ် ဝင်လို့ရပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကိုပဲ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ( ၂ဝဝ၂ ) ခုနှစ် ကျောင်းမတက်ခင် ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေ တက်ပါတယ်။ Maintaining and Repairing PC, A+ တို့၊ …
ထင်​ရှားကျော်​ကြား​တဲ့ ဗြိ​တိန် ရူပဗေဒ​ပညာ​ရှင် Stephan Hawking က One Direction အဖွဲ့​ရဲ့ ကြယ်ပွင့် Zayn Malik အဖွဲ့​က ထွက်​ခွာ​သွား​ရ​ခြင်း​နဲ့ ပတ်သက်​ပြီး သူ့​ရဲ့ အတွေး​အခေါ်​တွေ​ကို ဝေမျှ ခဲ့​ပါ​တယ်။ သူ့​ထင်မြင်​ချက်​ကတော့ ပရိသတ်​တွေ​အတွက် ကောင်း​သ​တင်း​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ Stephan Hawking ဟာ Cambridge တက္ကသိုလ် မှာ ရှိ​နေ​စဉ် ပရိသတ်​တွေ​ကို ဂြိုလ်​တု​က တစ်​ဆင့် သိ​လို​သည်​များ​ကို မေး​စေ​ပြီး 3D hologram က​နေ တစ်​ဆင့် ပြန်လည်​ဖြေ​ဆို​ပေး​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သူ​အဓိက ဖြေ​ရှင်း​ပေး​ခဲ့​တဲ့ ဘာသာ​ရပ်​ကတော့ လူ​သား​ဆန်​ခြင်​ရဲ့ အနာဂတ်​ကဲ့သို့​သော ဘာသာ​ရပ်​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​အခါ​မှာ မေးမြန်း​သူ​တစ်​ဦး​က Zayn Malik ရဲ့ …
အမျိုးသမီး​တစ်​ဦး​ဟာ လမ်း​တွေပေါ်​မှာ သူမ​နဲ့ မ​သိ​တဲ့ သူစိမ်း အမျိုးသား အယောက် ၁​၀​၀ ကို သူမ​နဲ့ အတူ ချစ်​တင်း​နှီးနှော​ဖို့​အတွက် လိုက်လံ မေးမြန်း​ခဲ့​ပါ​တယ်။ အမှန်​တစ်​ကယ်​ကတော့ whatever.com ဆို​တဲ့ ဝက်ဘ်​ဆိုက်​တစ်​ခု​က လုပ်​နေ​တဲ့ လူ​မှု​အတွေ့​အကြုံ စစ်ဆေး​မှု တစ်​ခု​သာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အရင်​တစ်​ခေါက်​က​လည်း အမျိုးသား​တစ်​ယောက်​က အမျိုးသမီး အယောက် ၁​၀​၀ ကို သူ​နဲ့ ချစ်​တင်း​နှီးနှော​ဖို့ လိုက်လံ မေးမြန်း​ခဲ့​ရာ​မှာ အမျိုးသမီး အယောက် ၁​၀​၀ လုံး​က သူ့​ကို ငြင်း​ဆို​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။ အခု​တစ်​ခေါက်​မှာ​တော့ Andrea Wendel ဆို​သူ အမျိုးသမီး​ဟာ အမျိုးသား အယောက် ၁​၀​၀ ကို သူမ​နဲ့ အတူ ချစ်​တင်း​နှီးနှော​ဖို့ …
သင်္ကြန်​ကို တောင်ငူ​မှာ ဖြတ်​သန်း​ခဲ့​တဲ့ ရွှေမှုန်​ရ​တီ​ဟာ သင်္ကြန် အပြီး​မှာ​တော့ ကား​ကြီး​တွေ ဆက်တိုက်​ရိုက်​ဖို့ ရှိ​တယ်​လို့ ဆို​လာ​ပါ​တယ်။ “သင်္ကြန်​အပြီး​မှာ​တော့ ညီမ ကို​ဟိန်း​ဝေ​ယံ​နဲ့ ကား​ကြီး​ရိုက်​မယ်။ လူ​ရွှင်တော် ၅​၂ ယောက်​ပါ​မယ်။ ဒါ​ရိုက်​တာ​ကတော့ ကို​ပြည်​ဟိန်း​သီ​ဟ​နဲ့​ပါ။ ၂​၀​၁​၅ ထဲ​မှာ ကား​ကြီး လက်ခံ​ထား​တာ​က များ​တဲ့​အတွက် ညီမ​အရေအတွက်​ကို​တော့ မ​ပြော​ပြ​တော့​ပါ​ဘူး။ တောက်​လျှောက်​ကတော့ ကား​ကြီး​တွေ လက်ခံ​ထား​ပါ​တယ်”တဲ့။ အနု​ပညာ​လောက​မှာ နေရာ​တစ်​ခု ရ​လာ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ သူမ​က သူမ​ဖြတ်​သန်း​ခဲ့​တဲ့ အနု​ပညာ အခက်​အခဲ​ပိုင်း​နဲ့​ပတ်သက်​ပြီး​တော့​လဲ “ဒီ​အလုပ်​မှ မဟုတ်​ဘူး။ ဘယ်​အလုပ်​မှ မလွယ်​ကူ​ဘူး။ တချို့​အရာ​တွေ​က ပရိသတ်​တွေ​ကို ပါး​စပ်​နဲ့​ပြော​ပြ​လို့​မ​ရ​တဲ့ ခက်ခဲ​မှု၊ ပင်ပန်း​မှု​တွေ ရှိ​တယ်။ လိုချင်​တဲ့​အရာ တစ်​ခု​ကို​ဖြစ်​အောင် လုပ်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် စိတ်​ကတော့ …
မင်း​မျက်လုံး​တွေ​ကို ကိုယ်​ရင်​မ​ဆိုင်​ရဲ​ဘူး​ကလေး​ရယ်။ 〜〜〜〜〜〜〜〜 ကမ္ဘာ​တစ်​လွှား​က အင်​တာ​နက်​လောက​မှာ စိတ်​ထိခိုက်​ကြေကွဲ​ခဲ့​ရ​တဲ့ ပုံ​ကလေး​ပါ။ ဒီ​ပုံ​ကို​ကြည့်​ပြီး ငို​သူ​တွေ ငို​ကြ​တ​ယ​္။ ဆီး​ရီး​ယား ဒုက္ခ​သည်​စခန်း​တစ်​ခု​က လေး​နှစ်​သမီး​လေး Hudea ကို တူရကီ သတင်းစာဆရာ Osman Sağırl က တယ်​လီ​ဖို​တို တပ်​ထား​တဲ့ ကင်​မ​ရာ​နဲ့ ဓာတ်​ပုံ​ရိုက်​ဖို့ ချိန်​လိုက်​တော့ ကလေး​မ​လေး​က ကြောက်​စရာ သေ​နတ်​ကြီး ထင်မှတ်​ပြီး လက်​မြှောက်​လိုက်​ရှာ​တယ်။ စစ်​ပွဲ​ကြား​က ဒီ​ကလေး​ငယ်​ဟာ ထွက်ပြေး​ရင်၊ လက်မ​မြှောက်​ရင် သူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ် သေး⁠သေး​ကလေး ကျည်​ဗ​ရ​ပွ ဖြစ်​သွား​နိုင်​တယ်​ဆို​တဲ့ ခါး​သည်း​တဲ့ သင်​ခန်း​စာ​ကို. အရွယ်​နဲ့​မ​မျှ သိ​နေ​ရှာ​တယ်။ သေ​နတ်​ပြောင်း​ကြီး​လို့ သူ​ထင်​လိုက်​တဲ့ တယ်​လီ​ဖို​တို ပြောင်း​ဝ​ကို ကြည့်​ရင်း တင်း⁠တင်း​စေ့​ထား​တဲ့ နှုတ်ခမ်း​လေး​တွေ​ဟာ အသံ​မဲ့ …
ဆေးခြောက်​သုံး​ရ​တာ အပန်းပြေ​တယ်​ဆို​တာ မ​ယုံ​မ​ရှိ​ပါ​နဲ့။ ပြဿနာ​က ဆေးခြောက်​ကြောင့် အပန်းပြေ​တာ အရမ်း​များ​သွား​ရင် နှုံး​ပြီး​တော့ တက်တက်​ကြွ⁠ကြွ​မ​ရှိ​တော့​တာ​ပါ​ပဲ။ အပတ်​စဉ် ပုံ​မှန်​လိုလို ဆေးခြောက်​သုံး​နေ​တဲ့​သူ​တွေ​မှာ မ​သုံး​တဲ့​သူ​တွေ​ထက် ဒို​ပါ​မင်း ပမာဏ​နည်း​လာ​ပါ​တယ်။ ဒို​ပါ​မင်း​ဆို​တာ ဦးနှောက်​နဲ့ ကိုယ်​စိတ်​လှုပ်ရှား​မှု​ကို ဆက်​စပ်​ပေး​တဲ့ အာရုံကြော​ဖြန့်​ကျက်​မှု​ဆိုင်​ရာ ဓာတု​ဓါတ် တစ်​မျိုး​ပါ။ ဆေးခြောက်​အစွမ်း​ကြောင့် စိတ်​ခံစား​မှု​တွေ​ပြောင်းလဲ​လာ​ပြီး ဆေးခြောက်​သုံး​သူ​တွေ​မှာ ဒို​ပါ​မင်း ပမာဏ​များ​နေ​လိမ့်​မယ်​လို့ သိပ္ပံ​ပညာ​ရှင်​တွေ​က ယူဆ​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။ လက်တွေ့​မှာ PET ဦးနှောက်​ဓါတ်​မှန် ရိုက်​ကြည့်​လိုက်​တဲ့​အခါ ထင်​ထား​တာ​နဲ့​တခြား​စီ​ဖြစ်​နေ​တာ​ကို အံ့ဩ​စွာ​နဲ့​ပဲ တွေ့​ရှိ​ခဲ့​ကြ ပါ​တယ်။ ဆေးခြောက်​သုံး​တာ အကြိမ်​ရေ​နည်း​သူ​တွေ​ထက် ဆေး​စွဲ​နေ​သူ​တွေ​မှာ ဒို​ပါ​မင်း​ပမာဏ အနည်း​ဆုံး​ဖြစ်​နေ​တာ ကို​တွေ့​ရှိ​ရ​ပြီး အဲ့​ဒီ့​လို​ဒို​ပါ​မင်း ပမာဏ​သိပ်​နည်း​တဲ့​အတွက် ဆေး​စွဲ​သူ​တွေ​ဟာ တက်တက်​ကြွ⁠ကြွ​မ​ရှိ​တော့​ပဲ တစ်​ခါ​တစ်​လေ​မှာ စိတ်ကျ​ရောဂါ​ဝင် နေ​ကြ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ …
လင်​ကွန်း​က ပြော​တယ် … ချွေတာ​စုဆောင်း​ခြင်း​ကို အား​မ​ပေး​ပဲ မ​ချမ်းသာ​နိုင်​ပါ ။ အားကြီး​သူ​တွေ​ကို အစိတ်​စိတ် ခွဲ​ခြင်း​ဖြင့် အားငယ်​သူ​များ​ကို မ​ကူညီ​နိုင်​ပါ ။ အားကြီး​သူ​ကို အား​ပျော့​အောင်​လုပ်​ခြင်း​ဖြင့် အားနည်း​သူ​ကို အား​ပြည့်​လာ​အောင် မ​လုပ်​နိုင်​ပါ ။ လ​စာ​ပေး​နေ​သူ​တွေ​ကို နှိမ်​ချ​ခြင်း​ဖြင့် လ​စာ ရ​သူ​တွေ​ကို​ဧ။် လ​စာ​ကို တိုး​မြင့်​မ​ပေး​နိုင်​ပါ ။ ချမ်းသာ​သူ​တွေ​ကို ပျက်စီး​စေ​ခြင်း​ဖြင့် ဆင်းရဲသား​များ​ကို မ​ကူညီ​နိုင်​ပါ ။ ဝင်ငွေ​ထက် ပို​သုံး​ခြင်း​ဖြင့် ဒုက္ခ​မှ မ​လွတ်မြောက်​နိုင်​ပါ ။ ချေးငှား​ထား​သော ငွေ​ဖြင့်​လုံခြုံ​မှု မ​ရ​ရှိ​နိုင်​ပါ ။ လူ​သား​ဧ။် လုပ်ကိုင်​လို​စိတ်၊ လွတ်လွတ်​လပ်​လပ် လုပ်ကိုင်​လို​စိတ်​ကို ဖယ်ရှား​ခြင်း​ဖြင့် သတ္တိ​နှင့် ကိုယ်​ကျင့် စာ​ရိတ္တ​ကို မ​တည်ဆောက်​နိုင်​ပါ ။ …